Inona avy ireo karazana homamiadana azo tsaboina amin'ny fitsaboana Proton? - California Protons
Inona avy ny karazan-jiro afaka fitsaboana aretin-tsaina momba ny fitsaboana?
Ny fitsaboana ny proton dia mety ho mahomby amin'ny fitsaboana ny lymphoma, ny homamiadan'ny nono, ny homamiadan'ny pancreatic, ny homamiadana prostate, ny homamiadan'ny havokavoka, ny kanseran'ny tenda, ny homamiadan'ny tiroida, ary ny toe-javatra maro hafa. Ny fitsaboana proton dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana am-boalohany sy ny fitsaboana matotra noho ny fiantraikany kely indrindra amin'ny taratra proton sy ny fahafahany mitsabo ny fivontosana malignant sy benign. Ny tahan'ny fahombiazan'ny fitsaboana proton dia miankina amin'ny sehatra, ny toerana misy ny homamiadana, ary ny antony hafa.
Diniho izay toe-javatra azo tsaboina amin'ny fitsaboana proton:
Ny fitsaboana Proton dia fitsaboana mahomby amin'ny homamiadana prostate. Ny ankamaroan'ny lehilahy izay voan'ny diagnostika amin'ny homamiadan'ny prostaty dia kandidà amin'ny fitsaboana proton.
Ny fitsaboana protonon dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny homamiadan'ny nono. Ao amin'ny fanadihadiana iray, ny 99% ny vehivavy manana kansera amin'ny ankavia no mihena ny fatra radiation mihena amin'ny fo.
Loha sy homamiadana
Ny homamiadan'ny loha sy ny tenda toy ny larynx, sinus, tonsil, ary ny tendan'ny tenda dia azo tsaboina amin'ny fitsaboana proton radiation. Ny fitsaboana amin'ny homamiadan'ny loha sy ny tendany dia miovaova amin'ny sehatra sy ny toerana misy ny fivontosana.
Ny homamiadan'ny pancreatic sy Bile Dile
Ny fitiliana ny homamiadana pankarato dia azo tsaboina amin'ny fitsaboana proton. Ny safidy fitsaboana dia mety miovaova amin'ny aretin'ny homamiadana.
Na ny haody Hodgkin sy ny Non-Hodgkin dia azo tsaboina amin'ny fitsaboana aretin-tsaina proton. Ny fametahana toy ny laser no ahafahan'ny oncologist taratra amin'ny tanjona mahomby amin'ny sela homamiadana ao amin'ny rafitra lymphatic.
Na ny homamiadana sela kely sy tsy madinika dia afaka mitsabo fitsaboana proton. Ny fitsaboana aretin-jaza dia safidy fitsaboana mahasoa ho an'ny marary manana aretim-po sy aretim-po hafa.
Kankana amin'ny tenda
Ny oncologist amin'ny taratra dia matetika no mitsabo ny homamiadan'ny tenda miaraka amin'ny fitsaboana protonena noho ny toerana mahasarika azy. Ny homamiadan'ny loha sy ny vozony hafa koa dia azo atao fitsaboana amin'ny proton.
Ny karazana homamiadana isan-karazany dia azo karakaraina amin'ny fitsaboana proton. Ny fitsaboana ny proton dia iray amin'ireo fitsaboana tsara indrindra amin'ny homamiadan'ny tiroida satria afaka manampy ny fampihenana ny taratra amin'ny tavy salama manodidina.
Matetika aorian'ny fandidiana, ny fitsaboana proton dia safidy fitsaboana natokana amin'ny fitsaboana kansera testicular. Ny habetsaky ny fotoana sy ny faharetan'ny fotoam-pitsaboana dia miovaova amin'ny marary.
Ny fitsaboana Proton dia fitsaboana natao ho an'ny homamiadana esophageal. Ny fandinihana dia mampiseho fa ny fatra amin'ny ratra amin'ny fo dia kely kokoa noho ny fitsaboana proton beam noho ny taratra x-ray.
Noho ny haitao ara-taratra mazava, dia maro ny tombontsoa azo avy amin'ny fitsaboana proton amin'ny homamiadan'ny vavony. Ny homamiadana gastrointestinal dia azo tsaboina tsara kokoa ary misy fiantraikany kely kokoa.
Sarcoma dia afaka mamaly ny fitsaboana fitsaboana radiation. Ny sarkas sasany izay azo tsaboina amin'ny fitsaboana proton dia misy: taolana, chrondrosarcoma, ary sarin-teny Ewing.
Azo tsaboina amin'ny fitsaboana proton 3 ny karazana kansera marobe (urothelial, sela squamous, ary adenocarcinoma). Ny taratra mihena ho an'ny sela salama sy ny fotoana fitsaboana haingana dia tombony amin'ny fitsaboana proton ho an'ny homamiadan'ny ratra.
Ny homamiadana amin'ny vava dia mety hateraky ny fampiasana sigara, fampiasana zava-pisotro misy alikaola, HPV, ary antony hafa. Ny fitsaboana ny proton dia safidy ho an'ireo izay voan'ny homamiadan'ny vava.
Ny fitiliana ny homamiadan'ny aty dia azo tsaboina amin'ny fitsaboana proton. Ny fitsaboana protonine dia ampiasaina ho an'ny fanaraha-maso ny fivontosana ary mety homena torohevitra arakaraka ny haavon'ny homamiadan'ny atiny.
Aorian'ny fandidiana, ny fitsaboana proton dia mety ho fitsaboana tsara indrindra amin'ny homamiadan'ny lela. Noho ny toerany sarotra, ny fitsaboana radiation dia ampiasaina amin'ny fisorohana ny fahavoazana amin'ny faritra manodidina.
Ny antony mahazatra indrindra amin'ny homamiadana analida dia HPV. Ny homamiadana dia afaka tsaboina amin'ny fitsaboana proton mba hampihenana ny voka-dratsin'ny fitsaboana.
Ny homamiadan'ny taolana sy ny hazondoha
Ny homamiadan'ny ati-doha sy ny hazondamosin'ny hazondamosim-bidy, anisan'izany ny hozatra malignant sy benign, dia azo tsaboina amin'ny fitsaboana proton. Ny fandinihana natao dia mampiseho fa ny kansera CNS tsaboina amin'ny fitsaboana proton dia manana fihenan'ny 50% amin'ny risika misy fihenan'ny ratra faharoa.
Ny homamiadana mihetsika
Ny safidy fitsaboana ho an'ny homamiadana amin'ny tenda dia miankina amin'ny sehatra. Ny fitsaboana proton ho an'ny homamiadana amin'ny tenda dia matetika omena alohan'ny na manaraka fandidiana.
Ny fikarakarana ny homamiadana nasal dia azo atao amin'ny fitsaboana proton. Ny fitsaboana proton ho an'ny homamiadan'ny nasal dia matetika voafantina noho ny fitsaboana radiation matetika noho ny fikendrena mazava azy.
Ny homamiadana pediatric
Ny voan'ny kansera amin'ny ankizy dia lymphoma, leukemia, ary medulloblastoma. Ny fitsaboana Proton dia safidy tsara ho an'ny homamiadana pediatric noho ny fatra voafehy tsara.
Ny fitsaboana proton ho an'ny homamiadan'ny gastrointestinal dia matetika no heverina ho safidy tsara kokoa amin'ny fitsaboana radiation fa noho ny fahafahany manafika ny fivontosana amin'ny fivontosana. Ny fitsaboana ny proton dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny homamiadan'ny gastrointestinal ao anatin'izany: kansera kankana, homamiadana, kansera, ary homamiadan'ny vavony.
Fihetseham-po sy ny kansera faharoa
Ny fitsaboana ny proton dia safidy ho an'ny fitsaboana homamiadana miverimberina sy faharoa. Amin'ny alàlan'ny kendrena mivantana ny fivontosana amin'ny haitao scam pensilihazo, ny fitsaboana proton dia miaro taova sy tavy mahasalama manodidina ny fivontosana faharoa.
Ny homamiadana kankana dia azo tsaboina amin'ny taratra fitsaboana proton. Ny halavan'ny fitsaboana ho an'ny homamiadana kankana dia miovaova amin'ny marary.